बारीमा होस् अथवा घरको छतमा फर्सीको मुन्टा फलाउने गर्नुभएको छ ? संसारमै सबै भन्दा स्वस्थ्य जीवन छ हजुरको, नछुटाई पढ्नुहोला – Annapurna Daily
बारीमा होस् अथवा घरको छतमा फर्सीको मुन्टा फलाउने गर्नुभएको छ ? संसारमै सबै भन्दा स्वस्थ्य जीवन छ हजुरको, नछुटाई पढ्नुहोला
On Jun 7, 2021 4,195
एजेन्सी । हुन त बजारमा वा तपाईँको करेसावारीमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातीमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टो वा भनौ फर्सीको पातको साग । उसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै लाभकारी हो ।
तर, फर्सीको पात वा मुन्टो खानाले हामी विभिन्न रोगबाट जोगिन सक्छौँ । फर्सीको पातको साग वा फर्सीको मुन्टो खानुको फाइदाबारे सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले आज हामी तपाईँलाई फर्सीको पातको साग खानुको फाइदाबारे जानकारी दिन चाहन्छौ ।
फर्सीको साग विभिन्न पौष्टिक तत्वले भरिएको हुन्छ । फर्सीको साग भिटामिन ई, सी, ए, बी ६, पोेटासियम, फोलिक एसिड, क्याल्सियम, कपर, प्रोटिन, म्याग्नेशियम, आइरन, फाइबर, फस्फोरस जस्ता खनिज पदार्थको राम्रो स्रोत हो ।
पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्छ: फर्सीको पातमा पाइने पोटासियमले तपाईँको पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ । साथै फर्सीको पातको सेवनले तपाईँको उच्च रक्तचापलाई पनि नियन्त्रणमा राख्छ । एजेन्सीको सहयोगमा